May 30, 2018 By Buzz Myanmar News in နိုင္ငံတကာ Tags: Woops Yang, အႏုပညာရွင္, ေတာင္ကိုရီးယား
အလုပ္ လုပ္ဖို႔ပ်င္းေနပါသလား? ဟိုသြားဒီသြား လည္းမသြားခ်င္ ဘာမွလည္း မလုပ္ခ်င္ ျဖစ္ေနပါသလား? ဒါဆို ဘာ အလုပ္မွမလုပ္ရဘဲ ပ်င္းေန႐ုံနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ အႏိုင္ရမယ္ဆိုရင္အဆင္မေျပဘူးလား? ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနႏိုင္သူေတြအတြက္ ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနက် ထူးထူးျခားျခား ပြဲေလးတစ္ခုမွာ ဝင္ေရာင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီပြဲေလးကေတာ့ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕Ichon Hangang ဥယ်ာဥ္မွာ က်င္းပတဲ့ အပ်င္း ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီၿပိဳင္ပြဲကို (၂၀၁၄) ခုႏွစ္က အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Woops Yang ကစတင္ဖန္တီးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပလာတာ ငါးႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ခါတိုင္းႏွစ္မွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြဟာ လုံးဝမအိပ္စက္ရပဲ ထိုင္ေနၾကရတာျဖစ္ေပမယ့္ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ အိပ္စက္ လဲေလ်ာင္းခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။ဒီၿပိဳင္ပြဲကို လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ စုစုေပါင္း (၈,၅၀၀) ရွိပါတယ္။
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြကို (၁၅) မိနစ္တစ္ႀကိမ္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းပုံမွန္ဟုတ္မဟုတ္ ခုလိုေနရတာ သူတို႔စိတ္အပန္း ေျပမေျပ စစ္ေဆးတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း ပုံမွန္ျဖစ္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြက အႏိုင္ရမွာပါ၊ ဒီၿပိဳင္ပြဲကို လူအမ်ားလည္းစိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေပက်င္းမွာလည္း အလားတူၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူေပါင္း (၈၀) ပါဝင္လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အလုပ်လုပ်ဖို့ပျင်းနေပါသလား? ဟိုသွားဒီသွား လည်းမသွားချင် ဘာမှလည်း မလုပ်ချင် ဖြစ်နေပါသလား? ဒါဆို ဘာအလုပ်မှမလုပ်ရဘဲ ပျင်းနေရုံနဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလား? ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေနိုင်သူတွေအတွက် တောင်ကိုရီယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ ထူးထူးခြားခြား ပွဲလေးတစ်ခုမှာ ဝင်ရောင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲလေးကတော့ ဆိုးလ်မြို့Ichon Hangang ဥယျာဉ်မှာ ကျင်းပတဲ့ အပျင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲကို (၂၀၁၄) ခုနှစ်က အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Woops Yang ကစတင်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဆိုရင် ပြိုင်ပွဲကျင်းပလာတာ ငါးကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းနှစ်မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာ လုံးဝမအိပ်စက်ရပဲ ထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပေမယ့် ယခုနှစ်မှာတော့ အိပ်စက် လဲလျောင်းခွင့် ပြုထားပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကို လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်သူ စုစုပေါင်း (၈,၅၀၀) ရှိပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး အေးမြတဲ့သစ်တောရိပ်အောက်မှာ လဲလျောင်းရင်း စကားမပြော၊ ဘယ်လို စက်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေကိုမှ မသုံး၊ဘာကိုမှ မလုပ်ရပဲ တိတ်ဆိတ်စွာ နေပေးရမှာပါ။ပြိုင်ပွဲဝင်ချိန် မိနစ် ကိုးဆယ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို (၁၅) မိနစ်တစ်ကြိမ် နှလုံးခုန်နှုန်းပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် ခုလိုနေရတာ သူတို့စိတ်အပန်း ပြေမပြေ စစ်ဆေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နှလုံးခုန်နှုန်း ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက အနိုင်ရမှာပါ၊ ဒီပြိုင်ပွဲကို လူအများလည်းစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပေကျင်းမှာလည်း အလားတူပြိုင်ပွဲမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့ရာ လူပေါင်း (၈၀) ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူအများစုက ဖုန်းသုံးရင်းအချိန်ကုန်တက်ကြတဲ့ ခုလိုခေတ်မှာ ဖုန်းလည်းမသုံးရ၊တခြားစက်ပစ္စည်းတွေလည်း ဘာမှမသုံးရ၊စကားမပြောရ ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲ နေဖို့ဆိုတာတော့ တကယ့်ကိုခက်ခဲမှာအမှန်ပါပဲ။